Ukuqwala izintaba kumelapha umphefumulo
UNKSZ Nonhlanhla Noni Shange ongumsunguli weqembu labaqwala izintaba Ubuhle Bemvelo esakhokha umoya Isithombe: SITHUNYELWE
Phili Mjoli | February 4, 2021
ISILONDA esingapholi sokushonelwa umzali siholele ekutheni aqwale izintaba.
UNksz Nonhlanhla Noni Shange waseShongweni Dam ongumsunguli weqembu labaqwala izintaba Ubuhle Bemvelo Hikers, uthe ukuhamba ezintabeni kumenza abe nokweneliseka, alapheke uma ekade ephatheke kabi futhi kumsiza nangokuthi umzimba wakhe uhlale ulolongekile.
Uthe ukuqwala intaba ukuqale ngesikhathi esebenza eGoli ngo-2014, ehamba nabangani bakhe ngeshwa ngo-2015 kwadingeka ukuthi abuyele ekhaya ngoba unina ubegula kakhulu okuphethe ngokuthi ashone ngawo lowo nyaka.
"Ngemuva kokushona kukamama bengihlala ngiphatheke kabi, ngizizwa sengathi kukhona okushodayo kimi. Ngaba nokwantalala nengcindezi yomphefumulo. Ngelinye ilanga ngazizwa ngikhumbula ukuqwala intaba kodwa uma ngibheka amaqembu akhona eKZN, ngabona ukuthi ngawezinye izinhlanga, ayikho eyabamnyama.“
AMALUNGU eqembu eliqwala izintaba Ubuhle Bemvelo esohambeni lwawo lokuhamba ebuka imvelo Isithombe: SITHUNYELWE
Uthe wabhala ezinkundleni zezokuxhumana emema abafuna ukuqwala izintaba ukuthi bamthinte ukuze bahambisane.
"Umngani wami wathi singahamba, sahamba sobabili. Kwathi sesiqedile safaka izithombe zethu. Ngemuva kwalokho sathola izicelo kubantu abaningi befuna ukusijoyina. Ngesikhathi sanda isibalo ngafikelwa ukuthi kumele sibe negama esizibiza ngalo kanti nabantu ababesijoyina babecabanga ukuthi siyiqembu. Lasunguleka kanjalo iqembu ngaliqamba ngokuthi Ubuhle Bemvelo, ngoba uma sihamba sibona ubuhle bemvelo kanti imvelo yiyo eselaphayo ezinkingeni esisuke sinazo ngesikhathi sihamba ezintabeni,“ kusho yena.
UNksz Shange uthe ukuqwala izintaba akuyona into elula kudinga ukuthi umphefumulo wakho nomzimba kube sesimeni esifanele lolo hambo.
"Kwezinye izintaba kuyashibilika, kunamatshe, inkungu nobunye ubungozi . Ubunzima esihlangana nabo sibuthatha njengezinselelo okumele sizinqobe ukuze sifike esicongweni. Uma isimo sesisibi kakhulu akekho otshela omunye ukuthi sekuyisikhathi sokuthi umuntu ngamunye azihlanganise noMdali wakhe ngomkhuleko. Kuyazenzekela intaba nentaba inendawo enemimoya yemvelo, eyelaphayo," kuchaza uNksz Shange.
Uthe njengoba engumsunguli weqembu unejoka lokuthi enze isiqiniseko sokuthi bonke ahamba nabo baphephile.
Uqhube wathi kuyenzeka endaweni okumele ngabe basheshe bafika esicongweni kubathathe isikhathi eside ngoba kukhona ongakwazi ukuhamba ngokushesha ngoba kukhona nasebekhulile, nabanemizimba ethe xaxa.
"Kuyenzeka kube nzima sesiphakathi nendawo sekukude phambili nasemuva. Kwenye intaba sagcina sinyuka sihlehla nyova sigaqa ngamadolo, amateku sesiwakhumulile ngenxa yokuthi indlela yayiyimbi futhi kunenkungu eyenza ukuthi kwathina singabonani. Uma sesehla nakhona kwaba umzukuzuku, singasayiboni indlela ," kuchaza uNksz Shange.
Uthe njengoba beyiqembu uma beya kude bahamba ngemoto eyodwa noma bagibelisane, kwehle izindleko.
Uthe sebeke baqwala izintaba zoKhahlamba baze bayophumela eLesotho, ezintabeni zaKwaSwayimane nezinye izindawo eziseThekwini .
Uthe bahlele ukuthi baye eWild Coast lapho bezohamba khona izinsuku ezinhlanu ngaphambi kokuthi bafinyelele lapho beya khona.
“Kuyenzeka ngosuku uhambe amakhilomitha angu-13, kodwa awukuzwa lokho ngoba endleleni nisuke nixoxa, kumnandi,” kusho yena.
Uqhube wathi kukaningi bethola imibuzo kubantu ababuza ukuthi abazisabi yini izinyoka njengoba behamba emahlathini.
"Inyoka ayisondeli lapho kunyakaza khona uma ikade ikhona iyabaleka uma kuqhamuka abantu," kusho yena